10 Fairytale nematende In Italy Unofanira Visit | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Fairytale nematende In Italy Unofanira Visit
(Last Updated On: 01/10/2021)
Pane zvakawanda fairytale nematende kuItaly unofanira kushanyira! With yakareba zvakadaro, akapfuma munhoroondo uye tsika nemagariro, nyika iyi ndiyo nzvimbo kuenda nokuda kuongorora nematende. Kukubatsira kuronga rwendo rwenyu, pano vari 10 fairytale nematende kuItaly kuti muri kuenda vanakidzwe:
Kana uri kuziva nzvimbo yechizvarirwo of Chianti waini, ichi ndipo unofanira kuenda. Izvi Castle pfuma sprawls pamusoro 3,000 maeka, wakakwana yemizambiringa neyemiorivhi. Uyezve, zviri zvamazvirokwazvo naka kuona munguva kwezuva kushanya.
Makomo akanaka Tuscany kuvanza ziso-nokukwezva ichi kasitoro pamwe nemamwe akitekicha. Muridzi wayo wezana ramakore rechi19 aida kuigadzirisa patsva nemafungiro eMabvazuva. Nemamwe mashoko, iye vakamutumidza flair kuti hapana mumwe Italian Castle anogona kuenzaniswa.
Kutsvaga chinhu zvishoma chakasiyana? At Castle ichi, unogona kunakidzwa vakazorora uchapukunyuka uye kwete chete runako mapurani nemakapoteredza. Sezvo 1700s, Nhare iyi akamira murindi tikaisa zvikomo yacho uye iye zvino ava hotera ine Amenities zhinji.
Pakuvara rechi10 remakore, Valenzano Castle nderimwe mukuru fairytale nematende achakamira kuItaly. Nhasi zvichiri sezvinoita akanaka uye hombe sezvo zvakaita ipapo. zvisinei, pane kushumira sezvinoita boka revarwi rinorinda, Nhare iyi zvino hotera, wakakwana matareti etenisi uye nzvimbo dzegorofu.
Izvi fairytale Castle nyaya yakatanga pamusoro chiuru adarika, uye pfuma akaita vakatsinhanisa maoko pakati vakundi kakawanda kubva. zvisinei, inzvimbo ine rugare mazuva ano, pamwe zvivako zvakawanda dzokurima uye yemizambiringa. Vashanyi rudo nokuti nhoroondo yacho inonakidza uye zvinoshamisa akitekicha.
Pane inonakidza ngano pamusoro imwe shongwe dzaro. Sezvo veko vanoti, ndiyo nzvimbo kuzorora mumwe wayo vaimbova varidzi. Zvinonzi, iye kushandiswa kiya kumusoro kushanyira vanhu kuti shongwe iyoyo, izvo zvakagumbura vanhu. zvisinei, kuti ngano hakusi chete chinhu kukwezva vashanyi. Gorgeous maonero wamapani akapoteredza wenhare kuti rwendo zvakakodzera.
Izvi pristine kutarira Castle anopa hunoshamisa maonero uye chakanakisisa mukana kudzidza mavakirwo Renaissance kumwedzi. Uyezve, ndiwo mumwe nomumwe zviuru gore vane vana vane makore ari pakati Italian nematende. Ichi chivako fairytale riri pedyo Florence, uye zviri zvikuru rwendo zuva kubva ipapo.
Cabbiavoli Castle kungava mufananidzo Tuscan Castle akakwana. Wayo wakanaka kuonekwa, minda, yemizambiringa, uye yemiorivhi, Nhare iyi Zvinongoreva anahwo zvose. Unogona kunyange kuenda bhiza pakufamba kana iwe kushanya ikoko!
Chimwe chezvinhu zvinoshamisa nhare muItaly yose iri vakahwanda precariously pamusoro cliffside. Mafungu Gungwa reMediterranean rotonhorera pamatombo, uye Castle ichi kuenda apa pamusoro pavo. hamungambovi kukwanisa kutenderera mukati, asi chivako achiri yakanaka mifananidzo.
Nokuti zvose evanofarira pakati vafambi, Montegufoni achava inonakidza kuenda. Ndiwo musha yakakurumbira Room pakati Masiki, rine Gino Severini's nakisisa Pamifananidzo. Uyezve, rinotsvaka zvachose dzinokatyamadza, uye inzvimbo kuti vose vanogona.
Ready kuona fairytale nematende kuItaly? Ivai nechokwadi kuronga pazororo wako uye Book Your Train Tickets nenguva!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Fairytale nematende In Italy Unofanira Visit” pana yako nzvimbo? unogona kana kutora mapikicha edu uye chinyorwa asi ndapota, chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffairytale-castles-italy%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#ngano #traveleurope nematende europetravel italyvacation chitima kufamba Mazano travelitaly